08 MARTSA 2019 TENY AMIN’NY PRIMATIORA – ZO SY ANJARA ANDRAIKITRY NY VEHIVAVY AMIN’NY FAMPANDROSOANA – Archives Nationales
Andro natao hanasongadinana manokana ny vehivavy rehetra maneran-tany ny datin’ny 08 martsa isan-taona.
Nankalaza izany teny Mahazoarivo ny vehivavy rehetra miasa eo anivon’ny Primatiora ny zoma 08 martsa 2019 lasa teo. Nilahatra nanao diabe nizotra nihazo ny Lapan’i Mahazoarivo izy ireo. Nasehon’izy ireo ny toeran’ny lambahoany eo amin’ny fitafy malagasy.
Koa satria tsy teto Antananarivo ny vadin’Atoa Praiministra io andro io (tany Mahajanga izy) dia Ramatoa vadin’ny Tale Kabinetra Miaramila no nitondra teny nisolo tena azy ho fanokafana ny fandraisam-pitenenana.
Vehivavy efatra samy manam-pahalalana sy ampy traikefa amin’ny fampandrosoana no nifandimby nitondra famelabelaran-kevitra ho fanentanana ny vehivavy hamantatra ny zony sy ny anjara andraikitra miandry azy amin’ny fampandrosoana.
– Ramatoa RABENARIVO Sahondra : ny anjara andraikitry ny vehivavy amin’ny fampandehanana ny raharaham-pirenena.
Navoitrany tamin’izany ireo vato misakana tsy ahafahan’ny vehivavy mandray anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana toy ny toe-tsaina mametraka fa tsy zava-dehibe ho an’ny vehivavy ny mandalim-pahaizana, eo ihany koa ny fitondrana vohoka sy ny fiterahana, ny kolikoly, …
– RAFAMATANANTSOA Hasina: ny andraikitry ny vehivavy manoloana ny fanjarian-tsakafo. Anisan’ny mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo, hoy izy, ny fivalanana izay mety mitarika fahafatesana mihitsy.
– Dr RASOARANTO Dorothée Myriame : ny lenta sy fahasalamam-bahoaka.
Araka ny namaritany azy ny atao hoe lenta dia ny fifandraisan’ny lehilahy sy ny vehivavy narafitry ny fiaraha-monina ka ny fanabeazana no mitazona sy mikajy izany. Ilaina, hoy izy, ary tena zava-dehibe ny fampianarana ny vehivavy. Zo fototra ho an’ny tsirairay ihany koa ny fahasalamana.
– RAJOHARISON Hanta Oliva : vehivavy sahy mandray andraikitra
Nanome fanalahidy maromaro ho amin’ny fiainana vehivavy mirindra izy: fitiavana, fahendrena, finoana, fahazotoana, fahatokisan-tena, fialan-tsasatra, fahaiza-mandamina, fananana saina tia karokaroka sy liam-pivoarana
Tonga nanome voninahitra io andro io ny Praiministra sady Lehiben’ny Governemanta, Atoa NTSAY Christian. Ny lahateny fohy nentiny no namarana tanteraka ny fotoana. Teboka iray tao anatin’ny fanambarany tamin’izany ny momba ny fanapahan-kevitry ny tsirairay miampy fandraisana andraikitra eo amin’ny fiainana andavanandro izay lalana mahomby mitondra ho amin’ny fiovana.